Hanimba ny toekarena sy ny fizahantany | NewsMada
Hanimba ny toekarena sy ny fizahantany
Hanehoan’izy ireo ny tsy fankasitrahany izao fomba fanaon’ny tompon’andraikitry ny Port Fluvial izao, efa nandrahona tsy hitatitra mpizahatany ny mpitatitra amin’ny lakana, ny 4 novambra sy ny 18 novambra 2019, nandritra ny fahatongavan’ny sambo lehibe mpitondra mpizahatany “Costa Mediterranea”. Tsy notanterahin’izy ireo anefa izany, satria lasa hanimba ny fizahantany sy ny lazan’i Madagasikara maneran-tany.
Velon-tenan’ny mponina sy ny tantsaha amin’iny Lakandranon’i Pangalana iny anefa ny fisian’ny varika sy ny biby mandady na mikisaka anaty ala, hotsidihin’ny vahiny. Misy anefa ny minia mamono ireny biby ireny, ny manimba mikapa ny hazo hatao saribao.
Efa resabe tany an-toerana ny fisian’ireo Malagasy namono sy mihinana varika tany amin’ny ala arovana Akanin’ny Nofy, ny tapaky ny taona 2019 iny. Maro ny mpizahatany vahiny nahare izany ka tonga tany an-toerana haka sary sy hanadihady, ary ahiana hanaparitaka izany any ivelany, ka hanimba ny endrik’i Madagasikara sy iny faritra iny.